Xiaomi Mi A3: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa okusemthethweni | I-Androidsis
Emva kweeveki ngamarhe kunye ukuvuza malunga nayo, Kule veki kwaqinisekiswa ukuba iXiaomi Mi A3 iya kuyo ngoku ngokusemthethweni eSpain. Umboniso osele uqhubeke kwaye Isivumela ukuba sazi uluhlu oluphakathi kwinqanaba elitsha lophawu lwaseTshayina. Isizukulwana sayo sesithathu nge-Android One, sibizwa ngokuba yenye yeemodeli ezaziwa kakhulu phakathi kuluhlu oluphakathi kwi-Android.
Njengoko kwakusele kusaziwa, le Xiaomi Mi A3 isekwe kwiCC9 ukuba uphawu lwaseTshayina luboniswe kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo. Ke uyilo luyafana kule meko, kunye nokubalulwa kwayo. Ngale modeli sinokubona kwakhona indlela apha phakathi kuluhlu lwenkampani eqhubela phambili.
Uyilo alusishiyi notshintsho ngokuthelekiswa neCC9. Ke le fowuni ibheja kwinotshi ngohlobo lwethontsi lamanzi ngaphambili. Ngelixa ngasemva inzwa kathathu isilindile, ukuze iikhamera ziphinde zibe yinto ebaluleke kakhulu kule fowuni yokutyikitya.
IXiaomi Mi CC9 kunye neMi CC9e sele zisesikweni: zonke iinkcukacha zilapha
1 Ukucaciswa kweXiaomi Mi A3
Ukucaciswa kweXiaomi Mi A3
Ngokubhekiselele kwinkcazo yayo, le Xiaomi Mi A3 yindawo ephakathi. Iyahambelana nezinto ezininzi esizibonayo ngoku kwiifowuni ezikweli candelo lentengiso. Kodwa ngoncedo lokuba ne-Android One njengenkqubo yokusebenza. Imodeli elungileyo, efika njengesiqhelo ngexabiso elifanelekileyo lemali yohlobo lwesiTshayina. Oku kukucaciswa kwayo:
IsikriniI-6,1-intshi ye-AMOLED ngesisombululo se-HD + kwi-1.560 x 720 kunye neRatio 19.5: 9
Inkqubo: IQualcomm Snapdragon 665
Ukugcina ngaphakathi: I-64/128 GB (Iyandiswa nge-MicroSD)
Cámara trasera: Ii-megapixels ezingama-48 + ii-megapixels ezi-8 eziphezulu kakhulu kwi-angle ye-bokeh
Ikhamera yangaphambili: Ii-megapixels ezingama-32
Inkqubo yokusebenzaI-Android 9 Pie (Android One)
Ibhetri: I-4.030 mAh
Conectividad4G / LTE, WiFi 802.11 a / c, iBluetooth 5.0, GPS, 3.5 mm Jack, USB, GLONASS
abanyeUmfundi weminwe odityaniswe kwiscreen
Ubukhulu: 153,48 x 71,85 x 8,4 mm
U bunzima: Iigram ezili-173,8
Kule modeli sinokubona uthotho lweenguqu eziphawulekayo xa kuthelekiswa nesizukulwana esidlulileyo. Kwelinye icala, le Xiaomi Mi A3 yongeza imeko yezikrini ngaphezulu kweesentimitha ezi-6 esizibonayo kakhulu kwi-Android. Basishiya nepaneli ye-6,1-intshi nge-notch ekubunjweni kwethontsi lamanzi. Nangona kuyamangalisa ukuba isisombululo sehlisiwe xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo, kuba kule meko basishiya nepaneli enesisombululo se-HD +. Ukuthanda okuncinci kolu luhlu luphakathi.
Ikhamera engasemva kathathu yenye into entsha, ukusukela kunyaka ophelileyo babenenzwa ephindwe kabini. Ifowuni isebenzisa inzwa ephambili ye-48 MP, enye yeefashoni ezinkulu kwi-Android namhlanje. Apho sifumana olunye uphuculo olubalulekileyo kukwibhetri. IXiaomi Mi A3 isishiya nomthamo we-4.030 mAh. Ke sinako ukuzimela okuqinisekileyo kwisixhobo, inkcukacha ebaluleke kakhulu kubasebenzisi. Inzwa yeminwe yeminwe idityaniswe kwiscreen esifanayo.
IXiaomi Mi A3 izokwaziswa ngeenguqulelo ezimbini kwintengiso, ngokwe-RAM kunye nokugcinwa. Inguqulelo ene-4/64 GB kunye nenye ene-6/128 GB. Kulindelwe ukuba ezi ntlobo zimbini zesixhobo ziya kuthengiswa eSpain xa kusungulwa ifowuni. Nangona ukuza kuthi ga ngoku akukho lwazi malunga nalo ukusuka kuhlobo.
Esi sixhobo siza kuthengiswa ngemibala emithathu, eluhlaza okwesibhakabhaka, engwevu nomhlophe. Ke sinokukhetha eyona siyithandayo kule meko. Okomzuzwana akukho mhla wokukhutshwa okanye ixabiso elinikiweyo yale Xiaomi Mi A3. Eyona nto inokwenzeka, iya kubetha ezivenkileni kwiiveki ezimbalwa. Ngokumalunga nexabiso, ixabiso liqikelelwa phakathi kwama-200 nama-250 euros. Kodwa kuya kufuneka silinde uphawu ngokwalo ukuze luthethe ngakumbi. Siza kujonga ezinye iindaba kwaye siya kuhlaziya ukungena.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » IXiaomi Mi A3: Uluhlu oluphakathi luhlaziywa
IXiaomi Mi A3 sele inosuku lokumiliselwa eSpain
IVivo S1: Uyilo olutsha kunye nokubalulwa komntu wakudala omaziyo